Mividiana fanafody fatoriana sy fanafody torimaso tsy misy preseta [Click iray monja]
Hitantsika 4 vokatra azo omena anao
Inona ny insomnia?
Manana olana amin'ny torimaso, sa miaina havizanana sy endrika hafa amin'ny fahantrana amin'ny antoandro? Ianao angamba mitady valiny amin'ilay fanontaniana hoe "Fa maninona aho no tsy matory?". Raha toa andro iray amin'ny fiainanao io dia mety tsy mahita tory ianao.
Ny tsy fahitan-tory dia karazana aretin-torimaso. Ireo marary mijaly amin'ity toe-javatra ity dia mahita fa sarotra ny matory, mijanona matory, na izy roa. Ny ankamaroan'ny marary dia tsy mahatsiaro ho velombelona ihany koa rehefa mifoha.
Misy antony maromaro mahatonga ny tsy fahitan-tory sy ny tsy fahitan-tory maharitra. Ny matihanina amin'ny fahasalamana dia manondro ny adin-tsaina, ny fahaketrahana, ny aretina hafa, ny fanaintainana ary ny aretina hafa no tena mahatonga izany. Ny reraka sy ny havizanana no vao manomboka. Ho an'ireo manana tsy fahitan-tory maharitra, ny marary dia mety mitaraina amin'ny tsy fiasan'ny ati-doha, fitarainana ara-batana ary fiovan'ny toe-po. Na dia tsy mandrahona fiainana aza ireo zavatra ireo, dia be loatra ny tsy fandriam-pahalemana ary mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fiainana sy ny kalitaon'ny fiainan'ny olona izany.
Raha miatrika olana amin'ny torimaso ianao dia aza mieritreritra irery. Ity dia olana ara-pahasalamana mahazatra any amin'ny firenena maro.
Ny tsy fahitan-tory dia misy fiatraikany amin'ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra, ny foko ary ny lahy sy ny vavy, saingy somary be loatra ny lehilahy noho ny vehivavy.
Raha ny marina, any Etazonia fotsiny, manodidina ny 30 ka hatramin'ny 40 isan-jaton'ny olon-dehibe no naneho fa nahatsapa ny soritr'aretin'ity aretina torimaso ity izy ireo. Ary tamin'ilay fanadihadiana natao ihany koa nataon'ny National Center for Sleep Disorder Research, 10 ka hatramin'ny 15 isan-jaton'ny olon-dehibe no nilaza fa manana tsy fahitan-tory maharitra izy ireo. Amerikanina manodidina ny 42 tapitrisa no tsy mahita torimaso maharitra.
Karazana tsy mifoka sigara
Ny olona iray dia mety hijaly amin'ny karazana tsy fahitan-tory 2:
ny tsy fahitan-tory vetivety (maranitra) dia maharitra mandritra ny andro na herinandro vitsivitsy
maharitra mandritra ny volana maro ny tsy fahitan-tory maharitra (maharitra)
Ny tsy fahitan-tory matetika dia faharoa amin'ny toe-javatra voalohany toy ny fahaketrahana na ny fanjifana fanafody sasany. Ny tsy fahitan-tory matetika dia tsy fahitan-tory voalohany, izay tsy fahitan-tory izay tsy misy ifandraisany amin'ny toe-pahasalamana na olana.
Soritr'aretina Insomnia: inona ireo famantarana ny tsy fahitan-tory?
Ny soritr'aretina lehibe indrindra amin'ny tsy fahitan-tory dia ny tsy fahampian'ny torimaso, ny torimaso, na ny fitambaran'ireo olana roa ireo. Ny olona sasany dia mety mifoha mandritra ny alina ka tsy afaka miverina matory na mifoha maraina be. Ny fambara hafa dia misy:
Mahatsiaro reraka rehefa mifoha
Matory be loatra na havizanana amin'ny antoandro
Fahasarotana mifantoka na mifantoka
Depression na fanahiana
Ny olana momba ny gastrointestina
Ahiahy momba ny torimaso
Fanaraha-maso maotera ratsy
Antony tsy fahitan-tory: inona no mahatonga ny tsy fahitan-tory?
Ny tsy fahitana torimaso dia zavatra mahatsiravina hananana, toa tsy misy antony mazava tokony hiarovanao ary rehefa mandeha ny ora rehetra dia tsapanao fa reraka ianao any am-piasana ny ampitso. Ny antony tsy fahitan-tory izay anananao manipika sy mihodina dia zavatra iray monja na mety ho anton-javatra isan-karazany.
Ny fahatakarana ny antony mahatonga ny tsy fahitan-tory dia hanampy anao hatory haingana kokoa ary hahita vahaolana amin'ity olana ity mandritra ny fotoana feno. Midika koa izany hoe alina matory tsara kokoa ho an'ny sakaizanao matory izay mety ho entin'ny torimaso ianao!
Efa nandre olona nilaza ve ianao fa eo an-dohanao daholo ny antony tsy fahatokisanao? Mety ho marina izany. Ny antony ara-psikolojika dia antony lehibe hitazomana ny olona hifoha. Betsaka ny fotoana tsy mianatra mamono ny olona ary mijanona tsy mieritreritra ireo zava-nitranga androany rehefa mody.
Mety hiteraka tsy fahitan-tory lehibe ny fanahiana. Ny fieritreretana ny zava-nitranga tany am-piasana sy izay hitranga ny ampitso dia afaka miambina anao mandritra ny alina. Toy izany koa ny fitaintainana momba ny fandoavana faktiora, ny fivelomana ary ny zavatra hafa isan-karazany izay tsy maintsy atrehinao isan'andro.
Ny adin-tsaina sy ny toe-javatra mampiady saina dia mety hiteraka tsy fahitan-tory koa. Ny fieritreretana momba ny zavatra tsy azonao ovaina dia hampifoha anao mandritra ny alina. Matetika ny fihenjanana dia ampiarahina amin'ny tebiteby ary rehefa manana ireo zavatra roa ireo eo amin'ny lovia ianao dia mety ho sarotra ny matory amin'ny alina.
Na dia be aza ny tsy fahitan-tory vokatry ny antony ara-psikolojika dia misy ny tranga mitranga rehefa misy ny antony ara-batana. Ny fiovan'ny hormonina dia mety miteraka tsy fahitan-tory, indrindra amin'ny vehivavy. Ny vehivavy dia afaka miaina tsy fahitan-tory mandritra ny fitondrana vohoka, ny fadimbolana ary ny fadim-bolana. Ny aretin-tsaina mialoha ny fotoam-pitenenana koa dia mety hitarika vehivavy hiaina tsy fahitan-tory.
Ny fahanterana dia mitondra fiovana ara-batana marobe ary ny iray amin'izany dia ny tsy fahitan-tory. Melatonin dia hormonina mifehy ny torimaso. Arakaraky ny itomboan'ny taonanao io hormonina io dia nafenina tao amin'ny vatana. Amin'ny fotoana ahatongavanao amin'ny faha-60 taonanao dia hihena be ny haavon'ny melatonin anao ary mety ho hitanao fa tsy afaka matory be ianao.
Ny olana ara-pisefoana sy ny alèjia dia afaka mampifoha anao ihany koa. Ny tsy fahazoana torimaso rehefa mahatsapa ny asma na ny allergy dia fahita sy takatra rehefa sendra mahazo aina ianao na dia reraka aza ianao. Jereo raha misy amin'ireo antony ireo no antony tsy fahitan-tory anao ary avy eo jereo izay azonao atao momba azy.
Ny tsy fahitan-tory dia aretina mahatsiravina nefa azo fehezina. Ny soritr'aretin'ny tsy fahitan-tory dia: ny fahaverezan'ny torimaso, ny torimaso mikorontana, ny fahasosorana ary ny fihenan'ny fifantohan-tsaina sy ny fahazavana. Ny antony tsy fahitan-tory amin'ny olon-dehibe dia samy hafa. Na dia tsy ny antony mahatonga ny tsy fahitan-tory amin'ny olon-dehibe aza dia an'ny olon-dehibe ihany, ny antony mahatonga ny tsy fahitan-tory amin'ny ankizy dia misy tsy fitoviana. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny olon-dehibe sy ny zaza mahatonga ny tsy fahitan-tory dia amin'ny karazany sy ny ambaratongan'ny antony.
Diagnosis momba ny tsy fahitan-tory: ahoana no hamaritana ny tsy fahitan-tory?
Ny dokotera na ny manam-pahaizana manokana momba ny torimaso dia hametraka fanontaniana maro momba ny tantaram-pitsaboana sy ny fomba fatorianao.
Ilaina koa ny fanadinana ara-batana hijerena ireo fepetra mety hitranga. Manaraka izany dia mety hahazo mari-pahaizana momba ny aretin-tsaina sy ny fidorohana zava-mahadomelina sy alikaola koa ianao.
Mba hahitana aretina tsy fahitan-tory dia tokony haharitra 1 volana mahery ny olanao hatory. Izy ireo koa dia tokony hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamanao. Tsy maintsy miteraka alahelo izy ireo na manelingelina ny toe-tsainao na ny zava-bitanao.
Ny dokotera na ny manam-pahaizana manokana dia mety hangataka anao hitahiry bokin-kazo fatoriana mba hahafantaranao bebe kokoa ny fomba fatorianao.
Ny fitsapana hafa dia mety ilaina toy ny polysomnograph. Fitsapana iray mitranga mandritra ny torimasonao ity mba handraisana an-tsoratra ny fomba fatorianao. Azo atao ny manao actigraphy. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fitaovana kely misy tànana tanana antsoina hoe actigraph mba handrefesana ny hetsika sy ny torimaso amin'ny torimaso.
Fitsaboana tsy fahitan-tory: ahoana no hitsaboana ny tsy fahitan-tory?
Miankina betsaka amin'ny antony ny fitsaboana tsy fahitan-tory amin'ny fomba mahomby. Indraindray dia tsy mandeha irery ny tsy fahitan-tory, indrindra raha olana tsy maharitra toy ny jet lag no antony. Amin'ny fotoana hafa, mety mila manova ny fomba fiaina ianao toy ny fanaovana tadin'ny sofina na ny fanaovana torimaso alohan'ny torimaso mba handresena ny tsy fahitan-tory.
Misy safidy fitsaboana tsy fahitan-tory, ary misy ohatra azo voafantina ao anatin'izany ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena kognitive, ny fihinanana fanafody eken'ny FDA ary ny safidy fitsaboana voajanahary hafa toy ny fiovan'ny fomba fiainana.
Fitsaboana ara-pitondrantena kognitive na CBT
Ny safidy fitsaboana tsy fahitan-tory malaza iray dia amin'ny alàlan'ny fampiasana fitsaboana ara-pahalalana kognita na CBT. Ity dia heverina ho fomba tsy fitsaboana amin'ny famahana ny aretin-torimaso. Ity safidy fitsaboana ity dia miorina amin'ny finoana fa matetika ny tsy fahitan-tory matetika dia miaraka amin'ireo lafin-javatra maro. Amin'ity safidy fitsaboana ity dia hanontaniana ny marary momba ny aretin-torimaso ary ity dia fantatra amin'ny hoe fanadihadiana amin'ny klinika. Ary mba hitsaboana an-tsakany sy an-davany ny fikorontanana, fomba maro no hoheverina ho toy ny fameperana torimaso, fifehezana stimulus ary fahadiovan'ny torimaso mety. Ireo fomba fiasa rehetra ireo dia tokony hampiana amin'ny fialan-tsasatra mety.
Fampiasana fanafody eken'ny FDA (pilina natory)
Betsaka ny fanafody torimaso ampiasana sy ampijalian'ny marary tsy fahitan-tory maro, ary maro amin'ireo pilina natory ireo no heverina ho fanafody tsy voatanisa. Saingy tsy ny fanafody rehetra dia manampy amin'ny tsy fahitan-tory. Raha ny kaonferansa NIH tamin'ny 2005 momba ny fitantanana tsy fahitan-tory dia ny agonista mpandray ny benzodiazepine ihany no heverina fa mandaitra sy azo antoka amin'ny tsy fahitan-tory. Ny valandresaka dia namelabelatra ihany koa ny zava-misy fa ny fanafody torimaso hafa dia tohanan'ny porofo tsy ampy raha ny amin'ny fahombiazana sy ny fiarovana.
Fampiasana fanafody voajanahary
Betsaka ny olona no gaga amin'ny karazana fitsaboana torimaso voajanahary ampiasaina fa ny vahaolana rehetra voalaza etsy ambany dia manana tantara lava mahomby nefa azo antoka ihany koa.
Aromatherapy - Betsaka ny fitsaboana voajanahary amin'ny torimaso izay misy fofona miaraka amin'ny aromatherapy no be mpitia indrindra. Raha nampiasaina an-jatony taona maro lasa izay, ny rafitra fanaterana dia maloto fa androany kosa dia amidy ny fitaovana lafo vidy izay hamindroana menaka manitra manokana miaraka amin'ny fofona mameno ny rivotra sy mampiroborobo ny torimaso mampitony. Ny menaka ilaina indrindra dia misy lavender, sandalwood, chamomile, ary rosemary.
Kalsioma sy Magnesium - Ireo fangaro voajanahary ireo dia mampiroborobo ny torimaso fa rehefa atambatra dia mihamitombo be ny haavon'ny fahombiazana. Ny zavatra lehibe momba an'io fanafody manokana io dia na dia mahazo torimaso ilaina aza ny olona amin'ny farany, dia manome tombony ara-pahasalamana ireo akora ireo. Ohatra, ny calcium dia manamafy ny hakitroky ny taolana raha ny maneziôma kosa misoroka aretina aretim-po.
Hops - Ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra labiera rehefa maheno ny teny hoe "hops" fa ity voninkazo vavy ity dia manolotra vokatra mampitony voajanahary. Mahaliana fa ny hop dia fanafody mampitony izay rehefa nalaina tamina fatra 30 ka hatramin'ny 120 milligramy mifototra amin'ny antony sy ny hamafin'ny olana amin'ny torimaso, dia tonga fotoana fohy aorian'ny torimaso ny torimaso.
L-theanine - Pure L-theanine dia asidra amine mahery izay avy amin'ny dite maitso. Fantatry ny ankamaroan'ny olona fa ny dite maitso dia nampiasaina tamin'ny tanjona ara-pahasalamana nandritra ny an'arivony taona maro ka noho izany dia misy dikany tonga lafatra fa ity dia iray amin'ireo fanafody matory voajanahary tsara indrindra. Fomba iray fampidirana ny asidra amine amin'ny vatana ny fisotroana dite maitso telo kaopy isan'andro nefa miaraka amin'izany dia azo alaina famenony dite maitso avo lenta. Ny iray amin'ireo lafiny mahavariana an'ny L-theanine dia ny fampiroboroboana ny torimaso mandry amin'ny alina nefa miteraka fahamailoana amin'ny andro.
fisaintsainana - Ny fampitoniana ny saina sy ny vatana amin'ny alàlan'ny fampiasana méditation dia mahasoa ho an'ny olona maro izay miady amin'ny torimaso mety. Ny fisaintsainana dia misy endrika isan-karazany mba hahafahan'ny olona misafidy izay tiany hampidirina am-bavaka, yoga, sary an-tsary, sary, sns. Ho an'ny valiny tsara indrindra dia asaina mampiasa ny fisaintsainana voafantina manodidina ny 10 minitra alohan'ny hatory.
Melatonin - Iray amin'ireo mahasoa indrindra amin'ny fangaro rehetra ampiasaina amin'ny fanafody torimaso voajanahary, melatonin dia hormonina novokarina tao amin'ny vatana hamporisihana ny torimaso. Na izany aza, rehefa misy olona tsy ampy an'io hormonina io na mijaly amin'ny olana matory tena matotra dia manampy ny melatonin amin'ny endrika famenony. Fanamarihana iray lehibe dia ny mety hisian'ny poizina, tsy fiterahana ary famoifoizana raha be loatra ny fatra ka tsy maintsy miresaka amin'ny dokotera ny olona alohan'ny handraisany ity famenon-tsakafo ity.
Valerian - Amin'ireo akora ampiasaina amin'ny fanamboarana fanafody torimaso voajanahary, ny Valerian angamba no ahitra ampiasaina matetika. Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny valerian dia mampiroborobo ny torimaso lalina nefa koa manafaingana ny fotoana ilain'ny olona iray hatoriana ary manatsara ny kalitaon'ny torimaso.
Salady liar - Ny salady liar ho an'ny fitsaboana torimaso voajanahary dia azo vidiana amin'ny magazay fivarotana sakafo iray manontolo, tsenan'ny tantsaha eo an-toerana, indraindray ao amin'ny faritra biolojika amin'ny magazay fivarotana lehibe kokoa, na raha tiana, ambolena ao anaty zaridaina ao an-trano. Raha ny torimaso ratsy dia mifandraika amin'ny Restless Leg Syndrome na ny tebiteby, dia miasa tsara ny lettuce wild satria mamokatra vokany mampitony ary manamaivana ny tsy fahazoana aina mifandraika amin'ny RLS.
Miova ny fiainana
Betsaka ny olona manana olana amin'ny torimaso. Ity aretin-torimaso ity dia misy fiantraikany amin'ny Amerikanina 3.5 tapitrisa eo ho eo isan-taona. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba fiaina izay afaka manatsara ny fahazaranao matory:
Mametraha fandaharam-potoana - rehefa matory maraina ianao ary tara ny ampitso dia tsy fantatry ny vatanao hoe fotoana tokony hifohazana na hatoriana ary mandritra ny fotoana maharitra dia mety hijaly zavatra mitovy amin'ny jet lag ianao. Tsotra ny fanasitranana, amboary ny famantaranandronao mandritra ny ora mitovy isan'alina sy isa-maraina, anisan'izany ny faran'ny herinandro. Mazava ho azy fa hisy ny maningana indraindray, fa raha mandeha matory miaraka amin'izay ianao ary mifoha amin'ny fotoana iray, dia hanampy anao hatory tsara kokoa izany.
fanatanjahan-tena - ny fahazoana manao fanatanjahan-tena dia fanafody tsara amin'ny torimaso sy fatoriana. Ny fampihetseham-batana dia afaka mampihena ny adin-tsaina ary manamora kokoa ny torimaso sy hatory. Izay karazana fampihetseham-batana aerobika dia hanao fika; na izany aza, aza manao fanatanjahan-tena adiny telo alohan'ny hatory satria mety hiteraka paompy loatra ianao ka tsy hatory.
manaitaitra - atsipazo ireo manaitaitra toy ny kafeina, ny kafe no miharihary indrindra saingy misy ny soda, sôkôla, alikaola, zava-mahadomelina ary manafaka fanaintainana. Ny fitsaboana toy ny dite raokandro dia hanampy anao hatory sy hatory. Raha mifoka ianao, ity misy antony iray hafa tokony hialana, mampiakatra ny tosidra sy ny tahan'ny fivontosan'ny nikôtinina, samy manasarotra ny torimaso.
Foods - jereo izay nohaninao, izay manelingelina ny kibonao dia tokony hesorina amin'ny menio. Aza mihinana na inona na inona mavesatra alohan'ny hatory satria hampazoto anao hatrany ny fizotry ny fandevonan-kanina. Azonao atao ny mandresy ny hanoananao eo am-piomanana amin'ny alàlan'ny ronono vera ary hanampy anao hatory izy io satria feno tryptophan, asidra amine iray ampiasain'ny vatana hamokarana simika ao amin'ny ati-doha antsoina hoe serotonin izay manalefaka ny fiasan'ny hozatra.
Adinoy ny pilina natory - Ny dokotera dia hanome toromarika ireo mpanampy amin'ny torimaso ho an'ireo olona tsy matotra indrindra mba hanapotehana ny tsingerina mba hahazoany torimaso kely, fa tsara kokoa ny manandrana fanampiana ara-dalàna voajanahary hanasitranana tsy fahitan-tory. Ny zavatra misy pilina torimaso dia mety mampiankin-doha sy sarotra ialana aminy izy ireo. Ary, rehefa mandeha ny fotoana, dia very ny fahombiazan'izy ireo ary lasa mihamaro hatrany ianao.
Tsy misy ahiahy ao am-pandriana - aza matory amin'ny fanahiana. Manapaha hevitra amin'ny toerana iray sy ny fotoana dia hiahiahy momba ireo zavatra manelingelina anao ianao ary avy eo tsy hitondra azy ireo hatory. Azonao atao ny manahy momba ny zavatra ao an-dakozia na amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, fa tsy ao amin'ny efitrano fatoriana. Soraty izy ireo ary apetraho amin'ny toerana azo antoka - ivelan'ny efitrano fatoriana - amin'ny daty mampiahiahy anao. Hanampy anao hatory tsy misy ahiahy io. Ho sarotra amin'ny voalohany, fa vitanao izany.
Aza mandainga fotsiny eo - raha afaka 15-20 minitra dia tsy afaka matory ianao na miverina matory dia mifohaza ary manao zavatra mankaleo. Mamaky boky, misaintsaina, mijery fahitalavitra, na dia tsy mampientam-po aza izany, mandra-pahatongan'ny fahavononanao hatory.